Calanka magaalada Baariis
Baariis (Af-Faransiis: Paris) ama loo yaqaano magaalada iftiinka, Af-Faransiis: La Ville-Lumière. Waa magaalo madaxda dalka Faransiiska.
Baariis waxay ukala qeybsantahay 20 xaafadood, shacabka neh waxee gaarayaan, ilaa 14 milyan oo qof. xaafadkastaana waxa ay u qaybsantaa afar qaybood waxa magalada maamula maayarka dawlada hoose waxa ay kutaalaa Baariis wabiga siin waxa ay leedahay laba gagi diyaradeed oo kal ah ( Paris-Charles de Gaulle Airport, iyo Beauvais-Tillé Airport)
baariis wax ladeho ma jirto waxaa weeyaan paris wexeena ku taala frans. waa magalada dunida ugu dalxiska badan sanadihi,2000 waxa paris dalxis u yimi in ka badan 30 milyan o dalxisyal ah wa magalada jacaylka waxay can ku tahay raxada iyo cadarada waxa ku yala musiyamka calamka ugu wayn Louvre o u yalo,sawir gacmedka qaliga ah e Mona Lisa
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Baariis aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.